လေပြွန်ရောင်ခြင်း (Bronchitis) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » လေပြွန်ရောင်ခြင်း (Bronchitis)
Posted by manawphyulay on Jul 23, 2010 in Health & Fitness, Parenting & Pregnancy |0comments
လေပြွန် ရောင်ခြင်း ဆိုသည်မှာ အဆုတ် အတွင်း လေဖြတ် သန်းရာ လမ်းကြောင်း တစ်လျှောက် ရှိ အချွဲမြှေး လွှာ (mucous membrane) ရောင်ရမ်း ခြင်း ကို ခေါ် ပါတယ်.. လေပြွန် ပတ်လည် ရှိ အချွဲ မြှေး ရောင်ရမ်း ခြင်းနဲ့ အတူ ချွဲသလိပ် များပြား လာခြင်း ကြောင့် လေပြွန် ကျဉ်းမြောင်း လာ၍ ချောင်းဆိုး သလိပ် ထွက်ဖြစ် လာပြီး မောလာ တတ် ပါတယ်.. လေပြွန် ရောင်ခြင်း ကို
1. လတ်တလော လေပြွန် ရောင်ခြင်း (acute bronchitis) နဲ့
2. နာတာရှည် လေပြွန် ရောင်ခြင်း (chronic bronchitis) ဟု ခေါ်ဝေါ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်..
လတ်တလော လေပြွန် ရောင်ခြင်း ဆိုသည်မှာ အချိန် ကာလ ၆ ပတ် ထက် လျော့နည်း ပြီး လေပြွန် ရောင်ခြင်းကို ခေါ်ပြီး အသက် ရှူ လမ်းကြောင်း ပိုးဝင် မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ် ပါတယ်.. ၉၀ % ခန့် က ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးဝင် မှုကြောင့် ဖြစ်ရပြီး ကျန် ၁၀% ကသာ ဘက်တီး ရီးယား ပိုးကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်.. လက္ခဏာ များကတော့ ချွဲသလိပ် ထွက်၍ ချောင်းဆိုး ခြင်း၊ နုံးခွေ အားလျော့ လာခြင်း တို့ ဖြစ်ပေါ် တတ်ပြီး အချို့ မှာ ဖျားလာ ခြင်း နဲ့ အသက် ရှူရာ တွင် ရင်ကျပ် ပြီး ၀ီစီ သံ မြည်ခြင်း တို့ ဖြစ်ပေါ် တတ်ပါတယ်.. ပန်းနာ ရင်ကျပ် ရောဂါ ဖြစ်ပွား သူများ တွင်လည်း လေပြွန် ရောင်ခြင်း ဖြစ်ပေါ် တတ်ပြီး ပန်းနာ ကြောင့် လေပြွန် ရောင်ခြင်း (Asthmatic Bronchitis) လို့ ခေါ်ပါတယ်.. လတ်တလော လေပြွန် ရောင်ခြင်း ဖြစ်ပေါ် ပါက
• အိမ်တွင် လုံလောက် စွာ အနားယူပါ..
• အရည် များများ သောက်ပေးပါ..
• ဆေးလိပ် လုံးဝ မသောက် ပါနဲ့..
• ဖျားနာ ကိုက်ခဲ ခြင်းရှိ ပါက ပါရာ စီတမော သောက်နိုင် ပါတယ်..
• ချွဲပျော် ဆေးများ ကို ဆရာဝန် ညွှန်ကြား သည့်အတိုင်း သောက်သုံး ပါ..
• ချွဲမထွက် လျှင် (သို့) ချွဲနည်း သွားလျှင် ချောင်းဆိုး ပျောက်ဆေး (Cough Suppressant) သောက်နိုင် ပါတယ်..
• များသော အားဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးကြောင့် ဖြစ်သဖြင့် ပဋ်ိဇီဝ ဆေး (Antibiotic) များ မလို အပ်ပါ.. ဘက်တီး ရီးယား ကြောင့် ဖြစ်ပါက သင့်တော် သော ပဋ်ိဇီဝ ဆေးလို အပ် ပါတယ်..
ပုံမှန် ကျန်းမာ သောသူ များမှာ လတ်တလော လေပြွန် ရောင်ပြီး နောက် ပုံမှန် လေပြွန် အခြေ အနေ သို့ ပြန်ရောက် နိုင်ပါတယ်..
နာတာ ရှည် လေပြွန် ရောင်ခြင်း ဆိုသည် မှာ ချောင်းဆိုး ခြင်းဟာ တစ်နှစ် မှာ ၂ လ မှ ၃ လ ဆက်တိုက် ဆိုးပြီး အနည်း ဆုံး နှစ်နှစ် ထိ ဖြစ်ပွား ခြင်းကို ခေါ်ဆို ပါတယ်.. ဆေးလိပ် သောက်ခြင်း ဟာ နာတာ ရှည် လေပြွန် ရောင်ခြင်း ရဲ့ အဓိက အကြောင်း တစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်.. နာတာ ရှည် လေပြွန် ရောင်ခြင်းဟာ အကြောင်း အမျိုးမျိုး ပေါ် မူတည် ပြီး ဖြစ်ပွား တတ်ပါတယ်.. ပိုးဝင် လေပြွန် ရောင်ခြင်း မကြာ ခဏ ဖြစ်လျှင် သော်၎င်း၊ အသက် ရှူ လမ်းကြောင်း တစ်လျှောက် အမှုန် အငွေ့ တစ်မျိုးမျိုး ကြာရှည် စွာ ထိတွေ့ နေရ လျှင်သော် ၎င်း လေပြွန် အချွဲ မြှေးလွှာ အမြဲ ရောင်ရမ်း ပြီး လေပြွန် မွှေးမျှင် (Cilia) များ ပျက်စီး ကာ နာတာ ရှည် လေပြွန် ရောင်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်.. ကျောက်မီးသွေး မိုင်းလုပ်သားများ၊ သီးနှံ ဆွတ်ခူး ရသူ များ၊ သတ္တု လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် သူများ သည် အခြားသူများထက် နာတာ ရှည် လေပြွန် ရောင်ခြင်း ပိုမို ဖြစ်ပွား ကြောင်း တွေ့ရ ပါတယ်.. နာတာ ရှည် လေပြွန် ရောင်ခြင်း ဖြစ်ပွား လျှင်
• ဆေးလိပ် လုံးဝ ဖြတ်ရ ပါမယ်..
• ဆရာဝန် ညွှန်ကြား မှု မရှိပဲ ချောင်းဆိုး ပျောက်ဆေး (Cough Suppressant) များကို မသုံး ရပါ.. ချွဲပျော်ဆေး (Expectorant) များကို အသုံး ပြုနိုင် ပါတယ်..
• လေပြွန် ကျဉ်းမြောင်း ခြင်း (Bronchoconstriction) ဖြစ်ပေါ် ပါက လေပြွန် ကျယ်ဆေး (Bronchodilator) နဲ့ စတီး ရွိုက်ဆေး (Steroid) များကို အသုံး ပြုနိုင် ပါတယ်..
• သလိပ် အရောင် ပြောင်းခြင်း၊ ပုံမှန် ထက်များ လာခြင်း ဖြစ်ပေါ် ပါက သင့်တော် သော ပဋိ ဇီဝ ဆေးကို (၅) ရက်မှ (၁၀) ရက်ထိ သောက်ရပါမယ်..
လေပြွန် ရောင်ခြင်း မဖြစ် စေရန် ဆေးလိပ် မသောက် ရပါ။ မိမိ နေအိမ် တွင်း ဆေးလိပ် သောက်ခြင်း ကို တားမြစ် ရပါမယ်။ လူထူထပ် သော၊ အခိုး အငွေ့ များသော၊ ဖုံမှုန် ထူထပ် သော နေရာ များကို ရှောင်ရှား ရပါမယ်။ အအေး မိဖျား နာပါက လုံလောက် စွာ အနား ယူပါ။ ဆရာဝန် ညွန်ကြား သည့်ဆေး ကို လိုက်နာ သောက်သုံး ပါ။ အာဟာရ ပြည့်ဝ စွာစား သုံးပါ။ မကြာ ခဏ လက်ဆေးပါ။ အစား အသောက် အသုံး အဆောင် ပစ္စည်း များ မျှဝေ သုံးစွဲ ခြင်းရှောင် ကြဉ်ပါ။ နာတာ ရှည် လေပြွန် ရောင်သူ များဟာ အေးသော ရာသီ တွင် နွေးထွေး စွာ ၀တ်ဆင် ခြင်းဖြင့် အအေး မမိ အောင် ကာကွယ် နေထိုင်ပါ။ နမိုး နီးယား ကာကွယ် ဆေး(Pneumonia Vaccine)၊ တုပ်ကွေး ကာကွယ် ဆေး (Flu Vaccine) များ ကို ထိုးနှံ ထားပါ။ အစ ရှိသဖြင့် ကာကွယ် နေထိုင် သင့်ပါ ကြောင်း ရေးသား လိုက်ရ ပါတယ်.. အားလုံး အဆုတ် ရောဂါ အပေါင်းမှ ကင်းဝေးကြပါစေ…။